लाइटहाउस प्रदर्शन मेट्रिक्स बुझ्दै - Semalt बाट SEO सुझावहरू
लाइटहाउस प्रदर्शन मेट्रिक्स एक चीज हो जुन तपाईं एसईओको प्राविधिक पक्षहरूको बारेमा छलफल गर्दा भेट्न सक्नुहुनेछ। तपाईको सोचमा परेको हुन सक्छ कि यस परीक्षामा के समावेश छ वा कसरी तपाइँको वेबसाइटको प्रदर्शनमा परीक्षण चलाउने। तपाईं यहाँ हुन सक्नुहुन्छ किनकि तपाई लाइटहाउस के बारे मा छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ।
हामी यो प्रदर्शन मेट्रिक परीक्षण सबै नम्बरहरू बनाउँदछौं जुन तपाईंको साइटमा सम्बन्धित छ हाम्रो प्रयासमा टेस्ट प्रयोग गर्दछौं। लाइटहाउसको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै यहाँ छ।
लाइटहाउस के हो?
लाइटरूम एक खुला स्रोत लेखा परीक्षण उपकरण हो जुन पाँच प्रमुख क्षेत्रहरूमा मानकीकृत स्कोरहरू उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ, जस्तै:
प्रोग्रेसिभ वेब अनुप्रयोग
यस लेखको लागि, "लाइटहाउस" नाम परीक्षणको श्रृ of्खलामा सन्दर्भ गर्न प्रयोग गरिनेछ, त्यसैले पढ्दा अलमल्लमा नहुनुहोस्।
लाइटहाउसले प्रयोगशाला डेटा प्रयोग गरेर प्रदर्शन परीक्षणहरू चलाउँछ, जसलाई इमुलेटेड डाटा पनि भनिन्छ। यो पूर्वनिर्धारित उपकरणहरू र नेटवर्क सेटिंग्सको साथ निर्मित वातावरणमा संकलित गरिएको साइटको प्रदर्शन डाटा हो। प्रदर्शन डाटा महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले डिबगिंग प्रदर्शन मुद्दाहरूको लागि आवश्यक जानकारीको साथ मद्दत गर्दछ। एक नियन्त्रित वातावरणमा स्थानीय मेसिनमा अनुभव वास्तविक जीवन प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव नक्कल गर्न डिजाइन गरिएको छ।
लाइटहाउसमा अद्यावधिक गर्दै
5 मे, २०२० मा, क्रोमियम परियोजनाले यसको तीन मेट्रिकको सेटको घोषणा गर्‍यो जससँग Google समर्थित समर्थित खुला स्रोतले प्रदर्शन मापनमा प्रयोग गर्न सक्नेछ। मेट्रिक्सलाई वेब भिटेलहरू भनिन्थ्यो। तिनीहरू गुगलको पहलको हिस्सा हो, एसईओ विशेषज्ञहरूको लागि सामूहिक मार्गदर्शन प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको जब गुणस्तर संकेतहरू खोज्दै।
यी मेट्रिक्स एक प्रयोगकर्ता केन्द्रित तरीकाले वेब प्रदर्शन मापन डिजाइन गरीएको छ। यसको प्रारम्भिक सुरुवातबाट दुई हप्तामा, लाइटहाउस वी6ले यस परिमार्जन गरिएको संस्करण वेब कोर भिटेलको साथ यस अपडेटको प्राथमिक फोकसको रूपमा सुरू गर्‍यो।
जुलाई २०२० सम्म, हामीले लाइटहाउस वी's को मेट्रिक क्रोम of 84 को विमोचनको साथ गुगलका धेरै उत्पादनहरूमा देखाइएको देख्यौं। क्रोम देवटुल अडिट प्यानललाई लाइटहाउसको नाम पनि दिइयो। लाइटहाउस मेट्रिक पनि पृष्ठस्पेड इनसाइट्स र गुगल खोज कन्सोल द्वारा सन्दर्भित थियो।
आज, वेब कोर भिटेलहरूले कुल लाइटहाउस भारित प्रदर्शन स्कोरको आधा भन्दा बढी बनाउँछ। सामान्यतया बोल्दा, पृष्ठहरूले न्यूनतम प्रभावको अनुभव गर्न सुरू गर्दछ, लगभगसँग .3 83.2२% V6 मा दश बिन्दु वा कमको शिफ्ट देखाउँदै परीक्षणहरूको।
लाइटहाउस प्रयोग गरेर प्रदर्शन परीक्षण चलाउनु अघि तपाईंले के जान्नुपर्दछ
सही विधि लाई छान्दै
पद्धति तपाईले मामिलाहरूमा हिँड्न रोज्नु हुन्छ। लाइटहाउस अडिटहरू एक पटकमा पृष्ठ विश्लेषण गर्न सेट गरियो। तर तथ्य यो हो कि एकल पृष्ठ स्कोरले तपाईंको सम्पूर्ण साइटको प्रदर्शनको प्रतिनिधित्व गर्दैन, र किनभने तपाईंको गृह पृष्ठ लोड गर्न द्रुत छ यसको मतलब तपाईंको पूरा साइट लोड यति चाँडो हुँदैन।
तपाइँको साइट भित्र बहु ​​पृष्ठ प्रकारहरू परीक्षण गर्न साइटले कति राम्रो प्रदर्शन गर्छ भन्ने बारेको समग्र अनुमान प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका। यहाँ, हामी सर्वप्रथम प्रमुख साइट प्रकारहरू, टेम्पलेटहरू, र आगन्तुक रूपान्तरण पोइन्टहरू पहिचान गर्छौं (तिनीहरू साइन-अप, सदस्यता लिनुहोस्, र चेकआउट पृष्ठहरूमा हेर्नुहोस्)।
हामी हाम्रो विश्लेषणको अप्टिमाइजेसन चरणमा जानु भन्दा पहिले, हामी अनियमित रूपमा चयन गरिएको नमूना पृष्ठको प्रत्येक लाईटहाउस चलाउँछौं र स data्कलन गरिएको डेटा रेकर्ड गर्दछौं। यस डाटाबाट, हामी अब गर्न थिच्न सक्दो थिच्न सुधार थिच्ने सुधारमा आधारित। कुनै पनि डाटाको नोक्सान रोक्न, हामी JSON परिणामहरू बचत गर्छौं र लाइटहाउस दर्शकमा निर्भर गर्दछौं, जब हामी विस्तृत नतिजा जानकारीको एक टुक्रा आवश्यक हुन्छ।
उत्कृष्ट ROI प्रयोग गरेर बाईट गर्न ब्याकलग प्राप्त गर्दै
धेरै बर्षमा, हामीले एउटा चीजको लागि निश्चित कुरा सिक्यौं कि SEO कार्यका लागि आवश्यक संसाधनहरू प्राप्त गर्नु सरल छैन। इन-हाऊस एसईओ हुनु ठ्याक्कै सहयोगी हुँदैन किनकि तिनीहरू प्राय: नष्ट हुने टिकट प्राप्त गर्न कत्ति गाह्रो हुँदै नष्ट हुन्छन्। हाम्रो अनुभवबाट, हामीलाई थाहा छ कि गियरहरूलाई ग्रीस गर्ने उत्तम तरिका कार्यवाहक पहलहरूलाई प्राथमिकता दिएर हुन्छ, जसले उत्कृष्ट संख्यामा परिणाम दिन्छ जुन एसईओ विभागमा गरिएको लगानीलाई ब्याक अप गर्दछ।
डाटा खाता जसले महिनाको अन्तमा खाताको शिटहरू बनाउँदछ डलर चिन्ह बन्नेछ जसले हाम्रो विकास प्रयासहरूलाई औचित्य र पुरस्कृत गर्दछ। यो परिक्षण प्रदर्शन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकि त्यसो गर्दा तपाईसँग एक भन्दा बढी क्षेत्र फ्ल्याग हुने सम्भावना हुन्छ, विशेष गरी जब यो पहिलो पटक हो। ठिकै छ। तपाईको लाइटहाउस स्कोरिंग क्यालकुलेटर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन परिवर्तनले सब भन्दा ठूला धमाका हुन्छ।
लाईटहाउस टेस्ट कसरी चलाउने
यो एक नदीतर्फ लाग्ने धेरै पथहरूको मामला हो। यद्यपि त्यहाँ केहि पथहरू छन् जुन प्रयोगमा सजिलो वा बढी प्रष्ट हुन खडा हुन्छन्। ठिक छ, यदि तपाईं साईजो टेस्टलाई साकार प्रक्रियामा एकीकृत गर्ने आशा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई एनपीएमको गतिमा ल्याउन सकिन्छ।
के तपाइँसँग minutes मिनेट भन्दा कम समय छ तपाइँलाई बोर्ड सामना गर्न सोध्नु अघि? यी एक-मा-एक रिपोर्टहरूले तपाईंलाई गोला बारुद दिनु पर्छ तपाईंले तिनीहरूलाई विश्वस्त पार्नु पर्छ कि तपाईंको SEO राम्रो गर्दैछ। तपाईले प्रयोग गरेको जुनसुकै कार्यान्वयन विधि, मोबाइल उत्कृष्ट छ जबसम्म तपाईंसँग डेस्कटपको लागि विशेष प्रयोग केस हुँदैन।
१. क्रोम डेभटोल्स
हामी प्रत्येक पृष्ठ Chrome DevTools लाइटहाउस प्यानल प्रयोग गरेर व्यक्तिगत रूपमा परीक्षण गर्दछौं। यो रिपोर्ट महत्वपूर्ण छ किनकि यसले प्रयोगकर्ता अनुभवलाई अनुकरण गर्दछ यदि ब्राउजर प्रयोग गरीरहेको छ भने इन्कग्निटोमा वा ब्राउजर क्यास असक्षम भएको बेला पनि।
हाम्रो नजिक आउने हाम्रो विशेष तरिका परीक्षणको लागि क्रोम प्रोफाइल सिर्जना गर्नु हो तर यसलाई स्थानीय राख्नुहोस्। यसको मतलब कुनै सि Sy्क सक्षम छैन, कुनै पासवर्ड बचत छैन, वा कुनै अवस्थित गुगल खातासँग सम्बन्ध छैन। हामी प्रयोगकर्ताका लागि विस्तारहरू स्थापना पनि गर्दैनौं।
जब तपाइँ सेट हुनुहुन्छ, यहाँ छ कि तपाइँ कसरी लाउटहाउसलाई टेभटुलहरू प्रयोग गरेर परीक्षण गर्नुहुन्छ
क्रोममा इनकग्निटो उदाहरण चलाउनुहोस्।
DevTools मा नेटवर्क प्यानलमा जानुहोस् र क्यास अक्षम गर्न बक्समा टिक गर्नुहोस्। तपाईं यो विन्डोज र लिनक्समा Ctrl + Shift + I वा म्याकमा कमान्ड + विकल्प + I को साथ गर्न सक्नुहुनेछ।
लाइटहाउस प्यानलमा जानुहोस् र रिपोर्ट उत्पन्न गर्नुहोस् लाई क्लिक गर्नुहोस्।
एक पटक उत्पन्न गरिएको फाईल बचत गर्नुहोस्।
डेभटोल्सबाट लाइटहाउस चलाउँदा के फाइदा हुन्छ?
हामीले माथि उल्लेख गरेझैं लाइटहाउस विश्लेषण चलाउन धेरै तरिकाहरू छन्। के यसको मतलब यो पनि हो कि प्रत्येक विधिमा यसको भलाइ र विपक्ष हुन्छ।
यस विधिको फाइदा भनेको त्यो हो
तपाईं स्थानीय निर्माणहरू परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ र कुन पृष्ठहरू प्रामाणिक छन् भनेर फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
बचत भएका रिपोर्ट लाइटहाउस CI फरक उपकरणसँग तुलना गर्न सकिन्छ।
DevTools बाट लाइटहाउस चलाउनको ख्याल
तपाइँ एक पटकमा एक रिपोर्ट मात्र गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंले प्रत्येक रिपोर्ट म्यानुअली बचत गर्नुपर्नेछ।
२. जब निरन्तर समान पृष्ठहरू परीक्षण गर्दै
मानौं तपाईं उही पन्न बारम्बार, वेबको परिक्षण गर्न मन पराउनुहुन्छ। देव आदर्श छनौट हो। यो DevTools मात्र प्रयोग गरीरहेको छ कि तपाईं ती सबै पीक एक्सटेन्सन अक्षम गर्न आवश्यक छैन। यो विधि मूल रूपमा सीधा अगाडि छ। तपाईले गर्नुपर्ने भनेको:
वेब.देव/measure/ भ्रमण गर्नुहोस्
तपाईको गुगल खाताबाट साईन ईन गर्नुहोस्।
पृष्ठको URL प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईं अडिट गर्न चाहानुहुन्छ।
रन अडिट क्लिक गर्नुहोस्।
वेबबाट लाइटहाउस चलाउने प्रोहरू। देव
यसले पृष्ठको परिणामहरूको निफ्टी टाइमलाइन क्याप्चर गर्दछ।
मुद्दाहरूको सुधारका लागि प्रयोगकर्ताहरूमा गाईडहरूमा द्रुत लिंकहरू छन्।
रिपोर्ट लाइटहाउस सीआई डिफ उपकरण प्रयोग गरी तुलना गर्न सकिन्छ।
वेबबाट लाइटहाउस चलाउन कन्स। देव
तपाईं एक मात्र विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ र एक पटकमा एक रिपोर्ट गर्नुहोस्।
तपाईले ती युआरएलहरू अन्जानमा फेरि गर्नु नपरोस् भनेर समयको साथमा ट्र्याक गरेका युआरएलहरूको रेकर्ड राख्नै पर्छ।
लाइटहाउसका लागि नोड कमाण्ड-लाइन
जब तपाईं मापनमा परीक्षण खोज्दै हुनुहुन्छ, नोड कमान्ड-लाइन रुचाइएको दृष्टिकोण हो। के गर्ने बारे यहाँ गाईड छ:
एनपीएम स्थापना गर्नुहोस्: म्याक प्रयोगकर्ताका लागि होमब्रि use प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ताकि तपाईं मूर्ख निर्भरता समस्याहरूबाट बच्न सक्नुहुन्छ।
केवल यो कोड इनपुट गरेर लाइटहाउस मोड्युल स्थापना गर्नुहोस्: "एनपीएम स्थापना -g लाइटहाउस।"
तपाईं त्यसपछि एकल पाठ चलाउनुहुन्छ "लाइटहाउस <url>"।
प्रोग्रामिंगको रूपमा परीक्षण चलाएर प्रयोगको सूचीमा परीक्षणहरू चलाउनुहोस्।
नोडबाट लाइटहाउस चलाउने प्रोहरू
तपाईं एकै पटक धेरै रिपोर्टहरू चलाउन सक्नुहुन्छ।
तपाई यसलाई प्रोग्राम गर्न सक्नुहुनेछ समयको साथसाथै परिवर्तनहरू ट्र्याक गर्न स्वचालित रूपमा।
नोडबाट लाइटहाउस चलाउनको लागि विपक्ष
तपाईंसँग कोड कसरी गर्ने भन्ने बारे विचार हुनुपर्दछ।
यसको सेटअप गर्न समय चाहिन्छ।
प्रदर्शन मेट्रिक्सको जटिलताहरू हरेक साइटले सामना गर्ने चुनौतीहरूको सूचक हो। हामी प्रयोगकर्ता अनुभवको लागि प्रोक्सीको रूपमा प्रदर्शन मेट्रिक्समा निर्भर गर्दछौं। यसले हामीलाई प्रयोगकर्ताको मार्गमा हिंड्न र उनीहरूले के देख्छन् हेर्न अनुमति दिन्छ, अधिक उत्तरदायी साइटहरू निर्माण गर्न उनीहरूले अनुभव गरेको अनुभव अरूमा।
केहि अन्य उपकरणहरू जस्तै मेरो साइट उपकरणको परीक्षण र गुगल द्वारा मेरो साइट लागतले पनि काममा आउन सक्छ। हामी यी उपकरणहरू साइटमा प्रदर्शनको महत्त्वका लागि रूपान्तरण र ग्राहक-केन्द्रित तर्कहरू बनाउन प्रयोग गर्दछौं।
आशा छ, एकपटक तपाईंको प्रोजेक्टले क्रेसन प्राप्त गरे पछि, हामी तपाईंको व्याख्या गर्न सक्दछौं तपाईंको लाइटहाउसको एकल मेट्रिक प्रदर्शनले तपाईंको कुशल र सहयोगी ईञ्जिनियरि team टीमलाई के भन्न खोजेको हो।